Ungayisebenzisa kanjani imodi emnyama kuWhatsApp | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Aplicaciones, WhatsApp
Izikrini ezinobuchwepheshe be-OLED sezingaphezu kokuvamile emhlabeni wezingcingo, hhayi nje ngoba zisinikeza a ikhwalithi ephezulu, kodwa futhi ngoba isinikeza imibala ecace bha futhi ebukhali kanye nokusivumela ukuthi songe ibhethri ku-smartphone yethu, enye yezinto zayo eziyigugu kakhulu kubasebenzisi.
Kusukela i-Facebook ithenge i-WhatsApp ngo-2014 ngemali engaphezu kwezigidi ezingama-20.000 XNUMX, umbuso wesikhulumi semiyalezo emhlabeni wonke uthole izibuyekezo ezijwayelekile, ngezindaba ezincane kakhulu ngaphandle kwezidingo zabasebenzisi. Kuze kube namuhla, kungenye yezinto ezimbalwa ezinganikeli ukusekelwa kwemodi emnyama, okungenani kuze kube yisibuyekezo esilandelayo.
Futhi ngithi kuze kube ukubuyekezwa okulandelayo, ngoba uma ungumsebenzisi we-Android futhi uyingxenye yohlelo lwe-beta, kufanele ulande inguqulo 2.20.13, inguqulo ekuvumela ukuthi wenze kusebenze imodi emnyama. Ngenhlanhla, akudingeki ukuthi ube yingxenye yale kilabhu ekhethiwe futhi ungakwazi landa i-APK yale nguqulo bese uqala ukuyisebenzisa.
1 Ungasebenza kanjani imodi emnyama ku-WhatsApp
2 Imodi emnyama yeWhatsApp iyadumaza
3 Imodi emnyama ku-Android
Yenza kusebenze imodi emnyama, uma nje silande inguqulo 2.20.13 kusuka kusixhumanisi engisibonise ngenhla, siyaqhubeka ukuyifaka kudivayisi yethu. Akunasidingo sokwenza isipele izingxoxo esinakho esicelweni, ngoba zizohlala zinjalo.
Okulandelayo, uma sesivule uhlelo lokusebenza, chofoza amaphuzu amathathu asekhoneni eliphezulu kwesokudla sewindi lengxoxo futhi chofoza ku-Amasethingi.
Okulandelayo, chofoza ku Izingxoxo> Isihloko.
Kumenyu elandelayo, uhlelo lokusebenza lusinikeza izinketho ezintathu ukusetha imodi yohlelo lokusebenza:
Uma sifuna uhlelo lokusebenza lukhombise imodi emnyama lapho sihlele lo msebenzi ukuthi usebenze ku-smartphone yethu, kufanele sikhethe Okuzenzakalelayo kwesistimu.
Imodi emnyama yeWhatsApp iyadumaza
Enye yezinzuzo ubuchwepheshe be-OLED esinikeza bona ukuthi iyasivumela sebenzisa ama-LED kuphela abonisa umbala ngaphandle komnyama. Kuya ngokusetshenziswa kwansuku zonke kohlelo lokusebenza, ukonga ibhethri kungaba okuphawulekayo. Ngalo mqondo, akukhona ukuthi iWhatsApp seyephuzile, kepha futhi ukuthi ayikwenzi kahle.
Futhi ngithi ayikwenzi kahle, njengeTwitter neGoogle ezenze ngazo zonke izinhlelo zabo eziguqulelwe kwimodi emnyama. Imodi emnyama yeWhatsapp ayisebenzisi umbala ongemuva omnyama, njengohlelo lokusebenza lwe-Twitter, kepha ithatha umbala ompunga omnyama, ngakho-ke ukulondolozwa kwebhethri okungenzeka ukuthi esinye sezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni kunganyamalala ngokuphelele.
Imodi emnyama kuhlelo, kungaba yiWhatsApp, iTwitter noma enye kusivumela ukuthi sisebenzise uhlelo lokusebenza ebumnyameni noma ngokukhanya okuncane okukhona Uma kufanele ulungise ukugqama kwesikrini ukuze ungatholi i-punch emehlweni okubangelwa ukungafani kokukhanya okukhona nesikrini sohlelo lokusebenza.
Uhlobo lwezikrini I-LCD ikhanyisa iphaneli lonke ukubonisa imininingwane esikrininiAkunandaba noma ngabe kumnyama noma cha, yingakho ubuchwepheshe be-LED buyindlela enhle yokusindisa impilo yebhethri kuma-smartphones, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu kubasebenzisi namuhla.
Awudingi ukuya phezulu thola ama-Smartphones anezikrini ze-OLED, amamodeli afana nomndeni wakwa-OnePlus 7, Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Google Pixel 3a, I-Google Pixel 3a XL ... ngamanye ama-smartphones esingawathola cishe ama-euro angama-500 asinikeza isikrini se-LED, kungaba i-AMOLED, i-OLED noma i-P-LED.
Imodi emnyama ku-Android
Kuze kwaba ukwethulwa kwe-Android 10, lapho kusuka kuGoogle ngokwendalo bengeze imodi emnyama, imodi emnyama efaka esikhundleni esimhlophe esimhlophe samamenyu nezinhlelo zokusebenza ngompunga omnyama (inqobo nje uma izinhlelo zokusebenza ziyahambisana).
Kokubili i-Samsung ne-Huawei basebenzise imodi emnyama kudala kumatheminali abo ngokusebenzisa ungqimba lwabo lwokwenza ngokwezifiso, imodi yangempela emnyama, ngakho-ke esikhundleni somhlophe wendabuko ufake omnyama, akunampunga emnyama, usebenzisa ubuchwepheshe be-OLED.
Zonke izinhlelo zokusebenza abasinikeli bazo zombili zenzelwe imodi emnyama yangempela, into obekufanele yenziwe iGoogle, kepha mhlawumbe ngeke ikwenze, njengeWhatsApp, iGoogle ne-Twitter ku-Android, ngenxa yokuthi iningi lama-smartphones e-Android atholakala emakethe , Abanaso isikrini se-LED, kodwa i-LCD.
Umbala omsulwa omnyama kuzikrini ze-LCD ukhonjiswa njengempunga emnyama, kanti ezinye izindawo zikhanyise kakhulu kunezinye (ikakhulukazi emaphethelweni) ngenxa yezici zalobu buchwepheshe, ngakho-ke umphumela wokugcina, kungashiya okuningi okufiselekayo yize kungenjalo njalo.
Kodwa kuyo yonke inkinga kunesixazululo. Ku-Google Play Isitolo singathola izinhlelo ezihlukile ezisivumela ukuthi sazi ukuthi ngabe sifuna uhlelo lwangemuva kohlelo lokusebenza lube mnyama omsulwa uma sisebenzisa i-terminal enesikrini se-LED (esiboniswe kumenyu) noma omunye umbala ongemuva omnyama, olungele lapho i-terminal yethu inesikrini se-LCD.
Okucacayo ukuthi izingcweti azikwenzi kube nzima izimpilo zazo kuzinguqulo zezinhlelo ezizisebenzisela i-Android, okuphambene nalokho okwenzeka kuzinguqulo ze-iOS. Kuyaboniswa futhi ukuthi abanye onjiniyela kanye / noma izinkampani ezinkulu Baphatha abasebenzisi be-Android njengezinga lesibili.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Ungasebenza kanjani imodi emnyama ku-WhatsApp
Ungayithuthukisa kanjani Windows 10 ukusebenza